kofehin-saokika miakatra tarehy hydrogel sofina mihantona manandratra firming v saron-tava tarehy
● FITSANGANANA MAHASITRANA MAHASOA- Rehefa mandeha ny fotoana dia very endrika sy famaritana ny endritsika tarehy. Ny lambam-pandriana avo lenta dia misy fiakarana matanjaka izay afaka manenjana ny hoditra sy mamolavola ny tsipika tarehy.
● ANTI-AGING, ANTI-WRINKLE - Ny saron-tava namolavola anay dia manampy amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fahamendrehana sy ny elitika very noho ny fahanterana. Izy io dia manafoana ny hoditra milentika sy mandamina ny vala ary mihomehy noho ny endrika mahia sy matevina kokoa.
● CONTOURS & SCULPTS - Ny saron-tava collagen hydrogel izay misy asidra hyaluronic sy aloaly vera dia manampy amin'ny fanamafisana sy famaritana ny valanoranomaso ary koa mampihena ny fisehoan'ny saokany roa.
● mamelombelona ny hoditra - ity mason-tarehy miendrika v miendrika v ity dia ampidirina amina singa manampy amin'ny famonoana sy fanamboarana ny hoditra. Fanampin'izany, ny vokatra mangatsiaka dia mitazona ny hoditra ho madio sy vonona ny hihinana amin'ny andro.
● AZONAO AMIN'NY KIRA SENSITIVE - Ny saron-tava mavokely maivana dia hypoallergenic, malefaka ary mahazo aina. Mahatsapa ho tsara sy malina izy ireo, tsy toy ny saron-tava hafa izay mandratra ny sofina sy mahasosotra ny hoditra!
Ity vokatra ity dia mandray firafitry ny lamba tsy misy tenona sy hydrogel tsy misy tenona. Satria ity dia vokatra namboarina, ity vokatra ity dia tsy novolavolain'ny orinasanay. Manamboatra ny famokarana fotsiny izahay mifanaraka amin'ny takian'ny mpanjifa.
Ny takian'ny mpanjifa dia lamba tsotra, tsy tenona dia tokony ho lasitike, ary ny hatevin'ny hydrogel dia tokony ho matevina. Tamin'izany fotoana izany dia nanontany ny mpanjifa izahay hoe maninona ny fonosana hydrogel no tokony ho matevina. Namaly ny mpanjifa fa tokony hahatsapa ho mangatsiatsiaka ny fampihenana ny fivontosan'ny tavy ary hahatratrarana ny fihenan'ny tarehy.
Amin'ny farany, ny vahaolana dia ny lamba elastika any Japon miampy ny paozin'ny famonoana hafanana. Ny tombony ananantsika amin'ireo mpanamboatra hafa izay mamokatra ity vokatra ity dia mandroso ny teknolojia ananantsika ary mety ho avo kokoa ny atin'ny rano. Mandritra izany fotoana izany, noho ny fifehezana ny kalitao tsara sy ny kalitaonay milamina, dia saika tsy nisy olona nahatonga allergy noho ny fampiasana ny vokatra.
Teo aloha: Patch hydratel microcrystalline Hydrogel
Manaraka: Sticker amin'ny kentrona tsy misy tenona
Saron-tava Aloe Vera
Saron-tava amin'ny Peel Off